‘राष्ट्रिय चलचित्र दिवस’ माथी प्रश्न किन ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
‘राष्ट्रिय चलचित्र दिवस’ माथी प्रश्न किन ?
असोज १ गतेलाई ‘राष्ट्रिय चलचित्र दिवस’ मान्ने गरिएको छ । २०६८ सालमा चलचित्र विकास बोर्डले ‘राष्ट्रिय चलचित्र दिवस’ मनाउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष गणेश भण्डारीले २०६८ असोज १ गते धुमधामका साथ चलचित्र दिवस सम्पन्न गरे । त्यसपछि भने बोर्डले चलचित्र दिवस मनाएको र सम्झिएको पाइन्न । बिहीवार (हिजो) चलचित्र दिवसको अवसरमा केही चलचित्रकर्मीले सामाजिक सञ्जालमा शुभकामना आदान-प्रदान गरे ।
तर, चलचित्र विकास बोर्डले भने ‘चलचित्र दिवस’ सम्झिएन । जसले गर्दा चलचित्रकर्मीहरु पनि असोज १ गतेलाई चलचित्र दिवस मान्ने वा नमान्ने भन्नेमा अन्योल छन् । निर्देशक केपी पाठकले शुक्रवार फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै नेपाली चलचित्रको अथवा विश्व चलचित्रको कुनै साइनो नै नभएको दिन असोज १ गते नेपालको ‘राष्ट्रिय चलचित्र दिवस’ कसरी भयो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
यसअघि पनि केही चलचित्रकर्मीले असोज १ गतेलाई चलचित्र दिवसको रुपमा मनाउनु पर्ने कुनै आधार नभएको बताएका थिए । किनकि, यो मितिमा नेपाली चलचित्र निर्माण र प्रदर्शन भएको इतिहास छैन । तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष गणेश भण्डारीले असोज १ गतेलाई ‘चलचित्र दिवस’ घोषणा गर्दा आफूले सान्दर्भिक नभएको भन्दै विरोध जनाएको निर्देशक केपी पाठक स्मरण गर्छन् ।
उनले भने- ‘मैले नेपाली चलचित्रको साइनो नै नभएको दिन चलचित्र दिवस मनाउनु हुन्न भनेर यसबेला नै आवाज उठाएको थिएँ । तर, तत्कालीन बोर्ड अध्यक्षले मान्नु भएन । किनकि, त्यसबेला मन्त्रीले उहाँको राजीनामा मागेको अवस्था थियो । एक/दुई दिनमा राजीनामा दिनुपर्ने थियो । आफ्नै कार्यकालमा यो काम गर्दा इतिहासमा सम्झिनेछन् भनेर हतारमा घोषणा गर्नुभएको थियो ।’
चलचित्र दिवसको दिन तत्कालिन अध्यक्ष गणेश भण्डारी
तत्कालीन बोर्ड अध्यक्षको व्यक्तिगत आकांक्षाले चलचित्र क्षेत्रलाई फाइदा नगरेको उनको भनाई छ । यो विषयमा चलचित्रकर्मीबीच बहस हुनुपर्ने भए पनि कसैलाई चासो नभएको उनले गुनासो गरे । उनी अगाडि भन्छन्, ‘कुनै न कुनै कुरामा परिवर्तन भएको दिनलाई दिवसको रुपमा मान्ने गरिन्छ । असोज १ गते चलचित्र क्षेत्रमा यो काम भएको थियो भनेर खोइ बोर्डले स्पष्ट पार्न सकेको ?’
केपी पाठक असोज १ गते ‘सत्य हरिशचन्द्र’ वा ‘आमा’ को निर्माण र प्रदर्शन भएको जानकारी आफूलाई नभएको बताउँछन् । अन्य चलचित्रकर्मीलाई पनि यो दिन नेपाली चलचित्र इतिहासमा के भएको थियो भन्ने जानकारी नभएको उनले बताए । नेपाली चलचित्रको इतिहाससँग दिवसको साइनो हुनुपर्ने उनको तर्क छ । बोर्डलाई चलचित्र दिवसको मिति सच्चाउन उनको आग्रह छ ।